Ukushisa Aluminium Ucwecwe | Umakhi womshini wokushisa wokungeniswa | izixazululo zokushisa zokungeniswa
Ukushisa ukuhluma kwe-Aluminium
Ukushisa u-Aluminium Foil For Cap Sealing
I-Induction Heating Aluminium Foil Yokufakwa Kwesikhala nge-IGBT heater engenayo
Inhloso Isifudumezi sokungeniswa sisetshenziselwa ukushisa ucwecwe lwe-polymer laminated aluminium ngemizuzwana engu-0.5 kuya ku-2.0. Ukushisa okukhiqizwa ku-foil aluminium kuyancibilika i-polymer ebopha entanyeni yesitsha seplastiki.
Izinto ze-aluminium foil, i-polyethylene, i-polypropylene, i-polyvinylchloride, i-polystyrene, i-polyethylene terephthalate, i-styrene acrylonitrile
Ukushisa 300 - 400 (ºF), 149 - 204 (ºC)
I-Frequency 50 ku-200 kHz
Izinsiza ze-DAWEI eziqinile zesimo sokungeniswa kwamandla ezisebenza phakathi kwe-1 & 10 kW kumaza we-50- 200 kHz. Lawa manyunithi asebenza ngamakhanda wokuvala kude okuvumela ikhabethe elikhulu lamandla emishini ukuthi ibekwe kude nendawo yokukhiqiza esheshayo. Ukufika kwamamitha ayi-100 kungenzeka. I-microprocessor isetshenziselwa ukulawula
futhi uvikele uhlelo futhi uqinisekise ukuthi imvamisa yokusebenza efanele igcinwa ngaso sonke isikhathi nokuthi isitsha ngasinye
uthola inani elifanayo lokushisa kwamandla ukusuka kumjikelezo kuya kumjikelezo.
Inqubo Izinhlobo ezimbili ezihlukene ze-aluminium foil laminates ziyatholakala kulolu hlelo lokusebenza. Umhlangano wokuqala uhlanganisa ukusekelwa
ibhodi / ukuvuselelwa kabusha, ungqimba lwe-wax, ucwecwe lwe-aluminium, nefilimu yokushisa yezinhlelo ezisekelwayo (Umdwebo 1). Umhlangano wesibili ufaka ifilimu lokushisa okuphezulu, ucwecwe lwe-aluminium, nefilimu yokushisa izinhlelo zezinhlelo ezingasekelwa (Umdwebo 2). Inqubo ukulingana ulwelwesi ucwecwe ku-cap bese ulingana ikepisi esitsheni ngemuva kokugcwaliswa komkhiqizo.
Imiphumela Yomhlangano we-aluminium foil njengoba kukhonjisiwe ku-Figure 1, ukushisa okubangelwa ku-foil metallic yi-coil induction cishe
khona manjalo kuncibilikisa ukumboza kwepolymer nentamo yesitsha yakha uphawu lwe-hermetic phakathi kwefilimu lokushisa
nomphetho wesitsha. Ukushisa kubuye kuncibilikise i-wax phakathi kocingo lwe-aluminium kanye nebhodi langemuva. I-wax ingukuthi
kufakwe ebhodini elingemuva. Lokhu kubangela isibopho somoya esiqinile phakathi kocwecwe lwe-aluminium / ulwelwesi kanye nomugqa we
isitsha, ibhodi elingemuva likhishwe futhi lihlala ku-cap.
Inqubo (eqhubekayo) Esimweni sezingqimba ezingasekelwa ku-Figure 2, uhlangothi olulodwa lwe-aluminium foil luboshwe ngefilimu ye-polymer yokushisa evulekile futhi lobu buso obuzoxhumana nabo buvalwe esitsheni. Olunye uhlangothi lwefilili oluzothintana nokhiye lunefilimu yokuncibilika ephakeme evimbela ukunamathela kwe-aluminium kukhephu evumela umsebenzisi wokugcina ukuthi aqaqanise ikepisi. Ulwelwesi olungasekelwa luvame ukusetshenziswa lapho umsebenzisi wokugcina ehlaba khona ulwelwesi olusobala ngaphambi kokuhambisa umkhiqizo. Ucwecwe lwe-aluminium lusebenza njengesithiyo esivimbela ukuvuselelwa komkhiqizo futhi luwuvimbele ukuba wome.
Izigaba Ubuchwepheshe Amathegi Ukushisa ukuhluma kwe-Aluminium, ukuvalwa kwesihenqo esiphambanweni esiphakeme, ukufakwa kwe-cap caption, RF ukushisa aluminium foil
Lokungeniswa debonding carbon fiber tube
Induction Ukushisa Plate Yensimbi YOKWAKHA
Ukushisa kwe-Steel Die Induction
Induction Ukuqina Kwensimbi Yensimbi
Induction Steel Wire Tempering
lokungeniswa Preheating aluminium flanges